"ဆွေးနွေးချက်:ရှင်မဖြူကျွန်း" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"ဆွေးနွေးချက်:ရှင်မဖြူကျွန်း" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
၀၅:၀၂၊ ၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ
၇၅၅ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၈ လ
၀၉:၂၆၊ ၁၀ ဩဂုတ် ၂၀၁၃ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၀၅:၀၂၊ ၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
::ဒီဆောင်းပါးတွေထဲက အာဘော်တွေပါ။ အမှန်က အဲ့သလိုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ တိကျတဲ့ အဖြေရှိသင့်ပါတယ်။ လိုရာဆွဲပြောတာကတော့ မကောင်းပါဘူးဗျာ။။ --[[User:Battoe19|Battoe19]] ([[User talk:Battoe19|talk]]) ၁၃:၁၂၊ ၁၁ ဧ​ပြီ​ ၂၀၁၂ (UTC)http://www.google.co.th/search?q=Nirical+Gingira&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
:::I found these islands [http://en.wikipedia.org/wiki/St._Martin%27s_Island][http://en.wikipedia.org/wiki/Shapuree_Island] in English wikipedia and added to wikidata. the location of Shapuree Island is not clear in English wiki. [[User:Phyo WP|<span style="color:#a80000; background:#FECB00; text-decoration:inherit">ဖြိုး</span><span style="background:#8B0000"><span style="color:#FECB00">'''WP'''</span></span>]] ([[User talk:Phyo WP|ဆွေးနွေးရန်]]) ၀၉:၂၆၊ ၁၀ ဩ​ဂုတ်​ ၂၀၁၃ (UTC)
ဆောင်းပါးက ခေါင်းစဉ်ကစပြီး လွှဲနေသလိုပဲ​။ ရှင်မဖြူကျွန်းအကြောင်းမဟုတ်ပဲ ပထမ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ စစ်ပွဲအကြောင်းရေးသားထားတာ ဖြစ်နေတယ်။​ ဆောင်းပါးကို ဖျက် (သို့)​ ပေါင်းသင့်တယ်လို့ ထင်မိတယ်။​[[အသုံးပြုသူ:Denny Lynn|D.Lynn]] ([[အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Denny Lynn|ဆွေးနွေး]]) ၀၅:၀၂၊ ၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/498302" မှ ရယူရန်